Mahaleo (tarika) - Wikipedia
Mahaleo, midika hoe mahaleo-tena dia tarika mpihira iray avy ao Madagasikara. Tamin'ny taona 1972, nandritra ny tolon'ny mpianatra no niforonan'ny tarika izay ahitana an'i Dama, Dadah, Bekoto, Charles, Nonoh, Fafah ary Raoul.
Nitondra tsioka vaovao teo amin'ny zava-kanto malagasy ity tarika ity tamin'izany, tamin'ireo hirany maneho fanoherana ny tsy rariny, fitakiana zo, miventy ny fitiavana, ny fifankatiavana ary ny fahafatesana koa aza.
Niforona tamin'ny taona 70 tao Antsirabe., nandritra ny fihetsehan'ny mpianatra izay nahtonga ny fianjeran'ny fitondrana tamin'izany. Tamin'ny volana mai 1972 i Dama, Dadah, Bekoto, Fafah, Nono, Charles sy Raoul no naomboka niaraka, ary nadritra ny grevy tamin'izany, izy ireo no nanafana sy nanentana ny fotoana nadritra ny grevy tamin'ny Hira. Rehefa nahavita ny fianarany izy ireo, dia tao no lasa Dokotera, Dokotera mpandidy, Mpamboly ou Mpandinika Fiaraha-monina, na dia izany aza dia mbola nitohy foana ny fiarahany nihira. Ny 3 septambra 2010 dia nandao azy ireo i Raoul tamin'izy 59 taona ka dia enina sisa izy ireo.
Tranonkalan'ny tarika Mahaleo
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Mahaleo_(tarika)&oldid=794667"
Voaova farany tamin'ny 29 Novambra 2016 amin'ny 11:46 ity pejy ity